Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Ady & Fifandirana tamin’ny Avrily 2011
Ady & Fifandirana · Avrily, 2011
Tantara mikasika ny Ady & Fifandirana tamin'ny Avrily, 2011
14 Avrily 2011
08 Avrily 2011
07 Avrily 2011
Syria: Mofo dipaina sy Propagandy
Raha niditra amin'nyherinandro fahatelo ny fanoherana any Syria, dia nisy fileferana nataon'ny governemanta Assad mba hampitonena ny mpanao fihetsiketsehana. Androany dia nanakatona casino vaovao ao amin'ny fireneny ny fitondrana mba hahazoany sitraka amin'ny miozolomana mpitahiry nentin-drazana.
06 Avrily 2011
Mpanoratra Julie Owono · Cote d'Ivoire
05 Avrily 2011
Libia: Ny Vahoaka Mitatitra Vaovao Avy Any Ambava-Ady
Mitohy voasivana ny lahatsary momba an'i Libia rotiky ny ady izay ifanandrinan'ireo mpanohitra amin'ny herin'ny Kolonely Muammar Gaddafi mba hanonganana ny fitondrany izay efa naharitra 42 taona. Ity misy fantina lahatsary farany nalain'ireo mpampiasa aterineto any ambava-ady amin'ireo tanàna lehibe mbola ifandroritana any Libia.
04 Avrily 2011
Anatin'ny korontana ara-politika misy ankehitriny ao Côte d'Ivoire, ny tenifototra #civ2010 ao amin'ny twitter dia nanjary loharanom-baovao nànana ny toerany teo amin'ny firenena. Na izany aza, maro ireo mpampiasa twitter no nampiakatra ny feony ka nitaraina fa ilay tenifototra dia nanjary lasa fitaovana nampiasain'ny mpomba ny andaniny sy ny ankilany...
Resadresaka nifanaovana tamin'i Andy Carvin
Ho an'ny mpiserasera twitter 40 000 sy ireo mpikaroka vaovao avy amin'ny loharanom-baovao misy eo an-toerana izay tsy mitsaha-mitombo dia i Andy Carvin no fijanonana voalohany ao amin'ny twitter raha hijery vaovao manerana ny ilany andrefana sy avaratry Afrika. Manam-pahaizana manokana momba ny tetik'ady ao ami'nny NPR , nanakaiky hatrany ny...